Bah-Sadhaysna "baga" inay i tidhi, beerka ka ogsooni
Haddii uu biixiyaha Eebbahay ,isugu kay beego
Abaal badh ah abaal bur ah abaal bur iyo dheeraad ah
Sidaasi waxaa yidhi gabayaa soomaaliyeed mar uu lug ka jabay in mudo ahna u jiifay.
Hadaba xikmada ama macnaha weyn ee gabaygan xambaarsan yahay waxaan uga faa,iideysanaynaa maanta oo uu dalkii cadow shisheeye gacanta ku haysto iyadooy weheliyaan kuwo dabo dhilif ah oo soomali sheegtaa, sidaa daraadeed ayaan leenahay nin waliba wuxuu maanta kasbado ama shaqaysto ayaa lagu xasuusan doonaa ama loogu abaal celin doonaa.
Waxaanan leenahay oo aan baaq ugu diraynaa tixdan gabayga ah soomaalida oo dhan meel kasta ha joogaane waxaanan leenahay maanta dalkii cadow shisheeye iyo kuwo u adeegaya ayaa haysta ee meel halooga soo wada jeedo oo cadowgaa dalka ku soo duulay ha layska difaaco.
Waxaanan leeyahay soomaaliyeey yaan gumeysiga laysku eegin ee wada qaata qoriga oo maanta wiilal yar yar ayaa xabashida iyo daba dhilifkooda kaadida ku dhajaye yaan loo kala hadhin .
Waxaanad ogaataan goortay doonto ha noqotee inay iman doonto maalin cadowga soo duulay iyo kabo-qaad koodaba adhaxda laga jabin doono,Dadka iyo Dalkuna uu xor noqon doono, maalintaas ayaana kii daba dhilifka ahaa iyo kii biidhi qaataha ahaa ,iyo ka jaajuus ka ahba lala xisaab tami doonaa.
Waxaana taariikhdaa baal dahab ah kaga qormi doona mujaahidiinta soomaaliyeed ee gumeysi diidka ah ee hadh iyo habeenba heeganka u ah sidii ay Dadka iyo Dalkaba uga saari lahaayeen gumeysiga.